Ifektri yezixhobo zonyango | China Abavelisi bezixhobo zonyango kunye nabaxhasi
Ukuma simahla kwe-Ultrasonic Cleaners
I-QX uthotho lwe-washer ye-ultrasonic kubalulekile kumatshini wokuhlamba kwi-CSSD, igumbi lokusebenza kunye nelebhu.SHINVA ibonelela ngezisombululo ezihlanganisiweyo ze-washer, kubandakanya ukuhlamba kwangaphambili, ukuhlamba okwesibini kunye nokuhlamba okunzulu ngamaza ahlukeneyo.
Itheyibhile ephezulu ye-Ultrasonic Washers
I-washer encinci ye-ultrasonic isebenzisa umqondiso ophakamileyo oscillation, othunyelwa ngumvelisi we-ultrasonic, uguqula kwisiginali esiphakamileyo somqondiso oscillation kwaye usasaze kwi-ultrasonic medium-isisombululo sokucoca. I-ultrasonic isasazeka phambili kwisisombululo sokucoca ukuvelisa izigidi zamabhamu amancinci. Ezo bubble ziveliswa kwindawo yoxinzelelo olubi lokuhambisa ngokuthe nkqo kwe-ultrasonic ngelixa lifakwa ngokukhawuleza kwindawo yoxinzelelo elungileyo. Le nkqubo ibizwa ngokuba yi 'Cavitation'. Ngexesha lokunyanzelwa kweqamza, kuveliswa uxinzelelo oluphezulu kwangoko kwaye kuchaphazela amanqaku ukukhusela ukungcola okubambelele kumphezulu kunye nomsantsa wamanqaku ukufezekisa injongo yokucoca.
Iimpawu zeMveliso yeZiko-HGZ
■ 5.7-intshi yokulawula umbala kwesikrini.
Ch Igumbi liyila, licoceke lula ngaphandle kwentsalela yebhaktiriya.
■ ucango lweglasi olunobulali, kulula ukujonga imeko yangaphakathi yegumbi.
■ Iphasiwedi eyi-Smart electromagnetic lock, ikhuselekile kwaye ithembekile.
■ Inkqubo yokujinga ejikelezayo yerotoscopes.
■ Inkqubo ezine zeankile ezibekiweyo, macala onke ukukhusela ii-endoscopes.
■ Isibane esikhanyayo se-LED, sikhuselekile kwaye sinokuthenjwa, akukho bushushu buvelisa.
Ukomisa kunye nokugcina ngokufanelekileyo i-endoscope kubalulekile. Inxalenye yenkqubo yokuhlamba i-endoscope kunye nenkqubo yokubulala iintsholongwane, enxulumene ngqo ne-endoscope kunye nokhuseleko lwesigulana.